Magaalada Baydhabo ee Caasimada Koonfur Galbeed waxaa ka furmay cayaaro loogu magacdarey koobka is dhaxgalka bulshada Baydhabo Janaay,waxaana ku har damaya ilaa 30-kooxood oo ka dhisan gudaha magaalada Baydhabo,iyadoona Gudiga isboortiska gobalka uu cayaarahan qabtey waxaana ka gacan siiyey Gudi lagu magacaabo dan-wadaag oo qeybaha bulshada ka kooban islamarkaana ka shaqeeya is... Read more »
GUDDIGA OLOMBIKADA KONFUR GALBEED SOMALIYA OO WEBSIDE CUSUB FURAY. (www.southwestsomaliolympiccommittee.com)
Madaxweynaha Xiriirka Kubadda Cagta Aduunka ee (FIFA) Joseph S. Blatter ayaa Hambalyo u soo diray madaxweynaha cusub ee Xiriirka Kubadda Cagta Soomaaliya ee shalay Muqdisho lagu doortay Cabdi Qani Siciid Carab.
Blatter ayaa ku tilmaamay Cabdi Qani shakhsi waayo aragnimo durugsan u leh ciyaaraha dalka Somalia sameeyn weyn-na ku yeelan doona dhamaan isboortiga quruxdda badan ee dalka... Read more »
Maalinimadii Axadda ahayd ayaa Waxaa duco iyo baroor diiq loogu same eyey labada marxuum ee kala ah Macalin Dahir Gacameey iyo Abdulkadir Isoo Mareey, magaalada Manchester. Tacsidan ducada ah ayaa Waxaa SOO abaabulay BAHDA sportiga ee deggan DALKA Ingiriiska gaar ahaan magaalada Manchester. Barnaamijka OO xiriir iye ka ahaa Mohamed Afey ayaa halkaa ka sheegay in la akhriyo quraanka... Read more »
Waxaa dhammaan BAHDA SPORTIGA AMA Jaalliyadda SPORTIGA ee ku nool DALKA Ingiriiska lagu ogeysiinayaa in maalinimada Axadda OO AY bisha Agosto tahay 31.08.2014, lagu qaban doono barnaamij loogu ducayn doono labada Marxuum ee kala ah, Hayley qaran Macallin Dahir Gacameey iyo Hayley qaran Abdulkadir Isoo Mareey. Dhamaan shacabka Soomaliyeed mar labaad ogaysiinaynaa in AY ka SOO QAYB... Read more »
Maalinimadii shalay ayaa tartan cayaar kubadda ah laga FURAY magaalada Baydhabo. TARTANKA OO AY ka QAYB Galen ilaa iyo 12 kooxood, ayaa Waxaa qabanqaabiyey xiriirka kubadda CAGTA ee Koonfur GALBEED SOMALIYA. Tartankan OO so on doona in mud do ah ayaa Waxaa ka SOO QAYB galay madax ka socota dawladda somaliya, madaxda SPORTIGA gobolka Baay iyo dad weyne aad u fara badan. Xafladda... Read more »
Waxaa maanta OO Axad ahayd 24.08.2014 ka dhacay magaalada London, xaafadda Streatham tartan kubadda cagta ah OO loogu tala galay horumarinta dhalinyarada SOO koreysa. Tartankan Waxaa abaabulay kooxda MUQDISHO FC. Kooxha ka SOO QAYB galay tartankan OO tiradooda ahayd lix kooxood, afar koox OO reer London ah, Bristol iyo kooxda Moss Side Sports Club-Manchester. Cayaarta finalka... Read more »
Waxaa xalay magaalada barakaysan ee Makkah Sacuudi Arabia ku geeriyooday Macallin Daahir Gacameey OO ahaa halyeey, rug caddaa, macallin sport. Marxuumka OO Illaaheey nasiib Uga dhigay in uu ku geeriyoodo Xaramka ayaan waxaan Ilaaheey uga baryeynaa janadii Fardowsa. Eheladii, asxaabtii iyo bahdii SPORTIGA uu ka geeriyoodayna Samir iyo iimaan uu Ilaaheey uu ka siiyo. Dhammaan BAHDA... Read more »
1 / 3612345Next »	Somali Web Links